अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ)ले पनि हवाई सुरक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिँदै दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न सहजीकरण गर्न गर्दैआएको छ । समस्या न्यून हुनुको साटो बढ्दै गएको छ । समस्या लगातार बढ्दै गएका कारण कुनै न कुनै रुपमा समाधानको दीर्घकालीन प्रयत्न जरुरी रहेको आवश्यकता समेत महसुस भएको छ । युएस बंगला विमानको दुर्घटनापछि हवाई सुरक्षाका विषयमासमेत चासो र चिन्ता बढेको छ । विभिन्न खालका आशंका र अनुमान पनि आएका छन् । तर सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिसकेको सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदन नआई यसै भन्न नसकिने विज्ञ तथा जानकारहरुको भनाइ छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का पूर्व महानिर्देशक राजेशराज दली विगतमा भएका दुर्घटना जाँचबुझ आयोगले सिफारिश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या दोहोरिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “दुर्घटना जाँचबुझ आयोगको सिफारिश अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउनु जरुरी हुन्छ । तर किन त्यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको पाइँदैन ।” सोमबारको दुर्घटनाले हवाई सुरक्षाको पाटोमा समेत असर पर्नसक्ने देखिएको छ । पूर्व महानिर्देशक दलीका विचारमा हाम्रो आकाशको अवस्था, विमानको प्राविधिक अवस्था तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलमा खटिने कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा समेत अध्ययन हुनुपर्दछ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन २९, २०७४१७:१४
भण्डारी दाेस्राे कार्यकालकाे लागी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित
क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्ष तोडफोड !
मेक्सिकोमा ३२ जनाको सामूहिक चिहान भेटियो !
जङ्गली हात्ती मृत भेटियो !
चाइना पिपुल्स हस्पिटलमा समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकार माथि दुव्र्यहार !
५२ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका